माओवादी आमहडताल र्फिता, किन अचानक र्फिता भयो माओवादीको आमहडताल ? यस्तो छ र्फिता हुनुको रहस्य | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← काठमाण्डौमा ठाँउ ठाँउमा झडप, प्रहरीद्धारा हवाई फायर र एक दर्जन अश्रुग्याँस प्रहार , स्थीति नियन्त्रणमा	सरकार तत्काल ढल्दैन सुजाता →	माओवादी आमहडताल र्फिता, किन अचानक र्फिता भयो माओवादीको आमहडताल ? यस्तो छ र्फिता हुनुको रहस्य	07
रविन थपलिया काठमाण्डौ, वैशाख २४, राती ९.१५
एकीकृत माओवादीले ६ दिन देखि जारी आमहडताल र्फिता लिएको छ । केहिवेर अघि मात्र सम्पन्न माओवादीको स्थायीकमिटीको वैठकले तत्कालको लागि आमहडताल र्फिता लिने निर्णय गरेको माओवादीका प्रवत्ता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । माओवादीले आमहडताल र्फिता लिए पनि पर्सीवाट जिल्ला केन्द्रीत कार्यक्रम भने गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी वैठकले भोली भोली काठमाण्डौ लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा १२ वजे सभा गर्ने र केन्द्रीकृत रुपमा दिँउसो २ वजे विशाल शक्ति प्रर्दशन सहित सभा गर्ने वताएको छ ।
प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको राजीनामा नआए सम्म कुनै पनि हालतमा आमहडताल र्फिता नलिने अडान राख्दै आएको माओवादीले आज साँझ अचानक आमहडताल र्फिता लिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ । हिजो देखि विभिन्न देशका राजदुतहरुले माओवादी तथा अन्य दलका नेताहरुलाई भोटी समस्या समाधान गर्नको लागि आग्रह गरेका थिए । हिजो प्रचण्डले भारतीय राजदुतलाई भेटेका थिए भने आज अमेरीकी राजदुतलाई भेट गरेका थिए । त्यसै क्रममा अमेरीकी राजदूतले माओवादीलाई तत्काल आमहडताल र्फिता लिन आग्रह गरेका थिए । किन अचानक र्फिता भयो माओवादीको आमहडताल ? यस्तो छ र्फिता हुनुको रहस्य माओवादीले अचानक आमहडताल र्फिता लिने निर्णय गरेको ४ घण्टा अघि मात्र राजधानीको कलंकीमा आयोजना गरिएको एउटा माओवादीको आमसभामा वोल्दै माओवादीका उपाध्यक्ष वावुराम भट्टराईले आमहडताललाई अझै तिव्र वनाएर लैजाने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेको थिए आज साँझ वस्ने स्थायीकमीटिको वैठकले माओवादी आन्दोलनको स्वरुप र्निमाण गर्ने छ ।
हिजो देखि अलि आक्रामक वन्दै गईरहेको माओवादी आमहडताल यति छिट्टै माओवादीले र्फिता लिएला भनेर नेपाली राजनीतिमा कसैले पनि अडकल काटेका थिएनन् । आमहडताल सुरु हुनु भन्दा एक दिन अघि अर्थात मे १ तारीखका दिन राजधानीको खुल्लामञ्चमा आयोजना गरीएको लाखौको संख्यामा रहेको मजदुरहरुको भेलामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो नेपाल र नेपालीको लागि अन्तीम लडाँई रहेको र त्यसका निम्ती कटीवद्ध भएर लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसवेला उनले भनेका थिए पहिले जस्तो कुनै पनि हालतमा यो आमहडताल र्फिता हुने छैन् हामी यो अन्तीम युद्ध नजिते सम्म घर र्फकने छैनौ जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनीक भएको थियो । माओवादी आमहडताल हिंसात्मक हुन्छ र त्यसको ससक्त प्रतिरोध गर्ने सरकारी तयारी विच पनि माओवादीको यो हडताल सरकारी पक्षले सोचे जस्तो भएन ४ दिन सम्म शान्तिपुर्णनै रुपले सञ्चालन भयो । तर हिजो र आज माओवादी आमहडताल हिंसात्मक हुदै गएको तथा मुलुकभर प्रतिकारको स्थीति सृजना भएपछि माओवादीलाई यो हडताल सफल वनाउनको निम्ती चुनौति उत्पन्न भएको थियो ।
विभिन्न अडकलवाजी विच सुरु भएको माओवादी आमहडताल अझै ससक्त रुपले अगाडी वढाउने माओवादीका केन्द्रीय नेताहरुको भाषण विच अचानक स्थगीतको समाचारले मुलुकवासी अचम्मीत भएका छन् ।
माओवादी हडतालको चौथो दिन अर्थात हिजो र आज मुलुकभर माओवादी आमहडतालको विरोधमा प्रर्दशन हुन थालेपछि माओवादी गम्भीर भएको हो । काठमाण्डौका विभिन्न ठाँउमा हिजो र आज माओवादी विरुद्ध नारावाजी मात्र भएका थिएनन् उनिहरुसंग स्थानीयवासी समेत जाई लागेका थिए । आमहडताल लम्विदै जाँदा उपत्यकामा खाध्यान्न लगायतका अत्यावसेकीय चिजहरुको अभाव भईरहेको थियो ।
आज विहान राजधानीमा माओवादी विरोधका वावजुद पनि हजारौको संख्यामा निस्कीएको शान्तिपुर्ण र्याली सहितको जुलुसले माओवादी आन्दोलनलाई गतिलो धक्का दिएको महसुस माओवादी पक्षले गरेको हुनुपर्दछ । वसन्तपुरमा भएको शान्तिपुर्ण र्यालीमा समेत सहभागी हुन नदिन माओवादीले रत्तर्पावाट सर्वसाधारणलाई जान रोक लगाएको थिए । त्यसैको विरोधमा आज दिँउसो प्रर्दशनीमाग तथा रत्नपार्कमा पनि प्रहरी र माओवादी विच झडप भएको थियो भने आक्रोसीत माओवादी कार्यकर्ताहरुले र्यालीमा जाइ समेत लागेका थिए ।
काठमाण्डौमा विभिन्न जिल्लावाट ल्याइएका हजारौ कार्यकर्ताहरु विरामी पर्ने तथा रोगको प्रकोप पर्ने, उधोगी, व्यवसायी तथा पेसाकर्मीहरुको विरोधहुनु ,काठमाण्डौवासीको जिवनयापनमा थप संकट उत्पन्न हुदै जानु , युरोपेली युनीयत, अमेरीका लगायतका ठुला शक्तिकेन्द्रहरुले समेत माओवादीलाई आहडताल र्फिता लिनको लागि दवाव दिनु पनी आमहडताल र्फिता लिनुको मुख्य कारणको रुपमा लिइएको छ ।
माओवादीको आमहडताल सुरु भएकै दिन देखि सत्तारुढ दलहरुले सडकवाट कुनैपनि हालतमा सत्ता परिर्वतन हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए । यद्यपी माओवादीले आमहडताल र्फिता लिने निर्णय गर्नु भन्दा केहिवेर अघि मात्र सत्ता सञ्चालनको मुख्य घटन नेपाली काँग्रेसले पुन दोहोर्याएको थियो सडकवाट होइन सहमतीवाट मात्र सत्ता परिर्वतन हुने निर्णय गरेको थियो ।
वैदेशीक हस्तक्षेपको विरोध गदै आएको माओवादीले जारीराखेको आमहडतालको क्रममा हिजो र आज माओवादीका अध्यक्ष लगायतका केन्द्रीय नेताहरुसंग विभिन्न देशका राजदुतहरुले भेटेका थिए । सोही क्रममा उनिहरुले माओवादीलाई आमहडताल र्फिता लिन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा दवाव समेत दिएका थिए । हल्ला हल्लाकै विचमा विदेशी राजदुतहरुको भेटका विच माओवादीको जारी आमहडताल र्फिताको निर्णयलाई नेपाली राजनीति क्षेत्रमा चासोका साथ हेरीएको छ । Like this:Like Loading...
Posted by agnibana on मे 7, 2010 in Uncategorized
← काठमाण्डौमा ठाँउ ठाँउमा झडप, प्रहरीद्धारा हवाई फायर र एक दर्जन अश्रुग्याँस प्रहार , स्थीति नियन्त्रणमा	सरकार तत्काल ढल्दैन सुजाता →	One response to “माओवादी आमहडताल र्फिता, किन अचानक र्फिता भयो माओवादीको आमहडताल ? यस्तो छ र्फिता हुनुको रहस्य”	Pralaya	मे 7, 2010 at 7:08 अपराह्न	माओबादी को एस्तो लाचारीपन र बकम्फुसे आन्दोलन हरुले देश का सम्पूर्ण जनता को आँखा खोलि दिएको हुनु पर्दछ . सायद अब माओबादी येश घटना बाट चेत्यो होला र भबिस्य मा आम हड्ताल गर्नु अघि हजारौ पटक सोच्लान र येस्ता लाचार हरुका कुरा सुन्ने पित्थु हरु सहि बाटो मा हिड्ने प्रयाश गर्लान. इ देश का सत्रु हरुलाई सान्ति सम्झौता कार्यन्वयन नभएसम्म सत्ता त k सम्षद मा पनि लान हुन्न थियो. कुकुर लै घिउ नपचेको एस्लाई भन्दछन. अब फेरी निर्बाचन हुनु पर्छ अनि यी विदेश का कठपुतली बिदेशी नीति का पुछार माओबादी भन्ने जन्तु को जात्र गर्नु पर्छ. महान नेपाली जनता ले पक्कै यिनलाई सजाए दिन्छन. सबै समय को माग हो.